जलवायु परिवर्तनबारे नेपाली भाषाकाे पाठ्यक्रममा समेट्नुर्छ | eAdarsha.com
जलवायु परिवर्तनबारे नेपाली भाषाकाे पाठ्यक्रममा समेट्नुर्छ
पोखरा: नेपाल साहित्य महोत्सवको नवौं संस्करणअन्तर्गत दोस्रो दिन ‘जलवायु परिवर्तन र भविष्य’ शीर्षकमा छलफलसँगै सुरु भयो । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन, नेपालमा ती परिवर्तनले पारेको असर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस विषयसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका पहल, नीतिगत एवं संरचनागत प्रयासबारे कुराकानी भएको थियो ।
वक्ताहरू वायुमण्डलीय विज्ञानका अध्येता अरनिको पाण्डे, गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण सचिव डा. महेश्वर ढकाल र वातावरण संरक्षण अभियन्ता शिलशिला आचार्य थिए । जलवायु परिवर्तन र वातावरणको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा पनि वक्ताहरूले आआफ्नो अध्ययन, अनुसन्धानसहित धारणा व्यक्त गरे । उनीहरूसँगको छलफल सहजीकरण गरेका थिए रमेश भुसालले ।
हिमाललाई पृष्ठभूमिमा राखेर गरिएको कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका रुपमा वक्ताहरूले माछापुच्छ«े हिमाललाई प्रस्तुत गरे । हिउँविहीन बनेको उक्त हिमालमा कार्बोन डाइअक्साइड र ब्ल्याक कार्बोनले कति असर पारेको छ भन्ने विषयमा वक्ता अरनिको पाण्डेले बताए ।
उनले ब्ल्याक कार्बनले हावा तताउने र हिउँ पगाल्ने काम गर्ने जानकारी दिए । ती कार्बन २÷४ दिनदेखि २÷४ सातासम्म मात्र रहन्छ । जलवायु परिवर्तन एक दिनको तापक्रमसँग सम्बन्धित विषय नभई दशकौंदेखिको प्रक्रिया भएको अरनिकोले बताए । उनका अनुसार उत्पादित कार्बनडाइअक्साइड सयौं वर्ष वायुमण्डलमा जम्मा भएर बस्छ । र, पृथ्वीका लागि खप्टिएको सिरक जस्तो बन्छ । त्यसले पृथ्वीको तापक्रम बढाउँदै लगेको छ ।
अरनिको वायुमण्डलीय विज्ञानका अध्येता हुन् । ४०÷४५ वर्षअघि माछापुच्छ«ेबाट हिमनदी बग्ने गरेको र हाल ती नदी बाँकी नरहेको उनले सुनाए । ‘नेपालका अन्य हिमाली भेगतिर पनि कति खेर हिउँ पग्लन्छ । नदी र ताल बढ्छन् । बाढी आउँछ निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘यहाँ हिउँ मात्र पग्लने हुँदैन, त्यसले खेतीकिसानीमा, खाने पानीमा, वर्षामा असर पुग्छ ।’
जलवायु परिवर्तन र यसले पारेको असरबारे राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफल हुँदै आएको बताउँछन् डा. महेश्वर ढकाल । उनका अनुसार सृजित समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल भइरहेको छ । सन् १९९० को दशकमा भएको रियो सम्मेलनलगत्तै यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चर्चा भइरहेको छ, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा । मूलतः कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूका कारण विकास उन्मुख देशहरूलाई कसरी प्रभाव परेको छ र, विकसित देशहरूले कसरी विकास भइरहेका देशलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि सहयोग पु¥याउन सक्छन् भन्ने विषयमा बहस हुने गरेका छन् ।
आफूहरूले नेपालमा ‘पोलिथिन ब्याग’ प्रतिबन्ध गर्ने अभियानका समय भोग्नुपरेको अप्ठ्याराहरूबारे बताइन् । उनीहरूले झोलामा प्रतिबन्ध लगाउन खोज्दा बजारले झोला उत्पादकको दोष देखाउने, उत्पादक नीतिगत स्पष्टता खोज्ने र सरकार आम मानिसको चेतनामा प्रश्न गरेको उनले बताइन् । ती अप्ठ्याराहरूले शक्तिमा रहेका र आम मानिसबिचको मतभेद प्रष्ट पा¥यो ।
त्यस्तै हाल नेपालका स्थानीय तहमा हुने गरेका योजनाबिनाका विकास कार्यले पनि जलवायु परिवर्तनमा भूमिका खेलेको उनको तर्क छ । ‘हरेक जनप्रतिनिधि वा उनीहरूको आफन्तसँग डोजर छ । डोजरलाई वर्षभर काम दिन पनि भीर खनेर सडक बनाउने काम तीव्र छ,’ उनले भनिन्, ‘जङ्गल नासिएका छन् । एउटै ठाउँमा पुग्न दुईतीन वटा बाटो बनाइएका छन्, जुन दीर्घकालीन हुँदैनन् । एउटै वर्षापछि भत्किन्छ ।’ विकासका नाममा भएका यस्ता कार्यले पनि नकारात्मक असर पु¥याएको उनको कथन हो ।
मानिसको दैनिकीलाई प्रकृति सन्तुलित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । महेश्वर ढकालले भने छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनको जनसङ्ख्या, विकास र उत्पादक कार्यले पनि नेपाललाई असर पारिरहेको तर्क अघि सारे । ‘ती कार्यले हिमाल पग्लनेदेखि जैविक विविधतामा त असर पारेको छ, वैदेशिक सम्बन्ध आर्थिक र सामाजिकसँगै वातावरणसँग पनि जोडिएको विषय हो,’ उनले भने ।
त्यस्तै महेश्वर ढकालले नेपाली भाषामा जलवायु परिवर्तनबारे विषय पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने साथै अनौपारिक पाठ्यसामग्रीसमेत प्रकाशन गर्नुपर्ने बताए । भने, ‘मिडियाले पनि सायद यी विषय समेट्नुपर्छ । राजनीतिक विषय मात्र प्रकाश पार्दा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका कुरा छायामा परेका छन् ।’